Ireo fanadihadiana 38 tsara indrindra amin'ny Amazon Prime - Fialam-Boly
Celeb Style Teknolojia Fampihenan-Danja Fitaizana Amboary Eo Noho Eo Fironana Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Levitra Ahoana No Fomba Fanamboarana
Ireo fanadihadiana 38 tsara indrindra amin'ny Amazon Prime
Tianay ny fanadihadiana fanadihadiana tsara, fa noho ny safidin'ny streaming be dia be eto an-tanantsika, mazàna isika amin'ny farany mandany ny ankamaroan'ny alina amin'ny fikatsahana izay hojerena, fa tsy ny hijerena azy. Soa ihany, nanangona lisitr'ireo fanadihadiana fanadihadiana tsara indrindra izahay tao amin'ny Amazon Prime mba hanampy anao amin'izany olana izany.
1.'Jonas Brothers: Manenjika fahasambarana'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 36 minitra
Iza no ao anatiny? Nick, Joe ary Kevin Jonas (aka ny Jonas Brothers)
Iza no nitantana azy? John Lloyd Taylor
Fa inona izany? OK, tsy isan'andro no anokananay adiny roa hianarana momba ny tarika zazalahy fanta-daza, izay vao tafaraka indray taorian'ny nisarahan'izy ireo tamin'ny taona 2013. Na izany aza, raha efa nieritreritra ianao hoe nanao ahoana ny volan'izy ireo tamin'ny fanaovana peratra fahadiovana tao amin'ny The Disney Channel ka nahatratrarana ny iraisam-pirenena stardom rehefa olon-dehibe, ity horonantsary fanadihadiana ity dia hitondra anao amin'ny tsara sy ny ratsy ary ny ratsy tarehy. (Fampitandremana: Na ny mankahala aza dia hahazo fanajana adala amin'ny Jo Bros.)
Jereo ny 'Jonas Brothers: Chasing fahasambarana' (2019)
roa.'Izaho sy Dior'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 29 minitra
Iza no ao anatiny? Raf Simons, miaraka amin'ny fisehoan'ny olo-malaza avy amin'i Marion Cotillard, Isabelle Huppert, Jennifer Lawrence ary Sharon Stone
Iza no nitantana azy? Frédéric Tcheng
Fa inona izany? Ny sarimihetsika dia nosoratan'i Frédéric Tcheng ary nahazo fankatoavana avy hatrany fony izy nanao premiere voalohany tamin'ny Tribeca Film Festival. Manolotra fijerena ambadiky ny seho amin'ny vanim-potoana voalohan'ny talen'ny famoronana teo aloha Christian Dior, Raf Simons, izay nisaraka tamin'ny tranon'ny lamaody tamin'ny taona 2015. Tsy maintsy jerena ireo mavens lamaody.
Jereo ny 'Dior and I' (2015)
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 51 minitra
Iza no ao anatiny? Steve Gleason, Michel Varisco ary Rivers Gleason
Iza no nitantana azy? Clay Tweel
Fa inona izany? Steve Gleason dia nilalao ho an'ny New Orleans Saints talohan'ny nisotroany ronono tamin'ny 2008. Tamin'ny 2011 dia voan'ny ALS (na aretin'i Lou Gehrig) tamin'ny faha-34 taonany izy. Manaraka ity mpilalao NFL teo aloha ity ny dokotera rehefa miady amin'ny aretina tsy misy fiafarana izy, nefa lasa mpisolovava avokoa amin'ny fanampiana ny hafa hifanaraka amin'ny toe-javatra mampalahelo. Na dia manome aingam-panahy tsy mampino aza izy io, dia mpangalatra ranomaso feno ihany koa. Nampitandremana ianao.
Jereo ny 'Gleason' (2016)
Efatra.'Ny lalàna mamono olona'
Mandra-pahoviana? 2 ora sy 46 minitra
Iza no ao anatiny? Anwar Congo, Herman Koto ary Syamsul Arifin
Iza no nitantana azy? Joshua Oppenheimer
Fa inona izany? Manome fijerena lalina ireo olona tompon'andraikitra tamin'ny famonoana olona marobe tany Indonezia tamin'ny taona 1965 ka hatramin'ny 1966. Tsy ny sarimihetsika ihany no notendrena ho an'ny Oscar for Best Documentary Feature amin'ny mari-pankasitrahana Academy 2014, fa laharana laharana ihany koa 19 amin'ny Lisitry ny British Film Institute amin'ireo horonantsary fanadihadiana tsara indrindra natao hatramin'izay. NBD.
Jereo ny 'The Act of Famonoana' (2012)
5.'Ilay sarimihetsika siramamy'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 41 minitra
Iza no ao anatiny? Damon Gameau, miaraka amin'ny fisehoan'ny olo-malaza avy amin'i Hugh Jackman, Stephen Fry ary Zoë Gameau
Iza no nitantana azy? Damon Gameau
Fa inona izany? Raha efa nanontany tena ianao hoe ahoana ny fiantraikan'ny siramamy amin'ny vatana , tonga amin'ny toerana mety ianao. Mitovy amin'ny Super Size Me , ilay fanadihadiana dia manaraka an'i Damon Gameau satria mandany sakafo siramamy avo mandritra ny 30 andro, ary mahavariana ny valiny. Oh, ary notononintsika ve izy io fa horonantsary fanadihadiana lehibe indrindra any Aostralia?
Topazo maso ny 'That Sugar Sugar Film' (2015)
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 24 minitra
Iza no ao anatiny? Joshua Zeman, Barbara Brancaccio ary Bill Ellis
Iza no nitantana azy? Joshua Zeman sy Barbara Brancaccio
Fa inona izany? Amin'ny maha teratany Staten Island roa azy, ny mpamokatra horonantsary Joshua Zeman sy Barbara Brancaccio dia nihalehibe nandre ny tantaran'i Cropsey, boogeyman iray tena nisy nifandray tamin'ny fahafatesan'ny zaza dimy. Ao anatin'ny fiezahana miatrika ny tahotra amin'ny fahazazany, dia manadihady ny famonoana olona izy roa ary manazava ny antsipirian'ny tadin-damosina izay hahatonga anao hatory amin'ny jiro.
Jereo ny 'Cropsey' (2014)
7.'Tolotra tonga lafatra: Ilay mpifaninana fantany loatra'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 12 minitra
Iza no ao anatiny? Ted Slauson, Bob Barker ary Roger Dobkowitz
Iza no nitantana azy? CJ Wallis
Fa inona izany? Eritrereto fa maharesy ianao Mety ny vidiny ? Fantaro i Ted Slauson, lehilahy tompon'andraikitra amin'ny fanampiana mpifaninana hika hamantatra ny valiny rehetra amin'ny fizarana lalao amin'ny taona 2008. (Serieux.) Mandeha amin'ny mpijery ny tantaran'i Slauson ny sarimihetsika, manomboka amin'ny fahalianan'ny fahazazany Mety ny vidiny ary mamarana ny paikady izay nandresy tamin'ny fandreseny malaza.
Jereo ny 'Tolotra tonga lafatra: Ilay mpifaninana izay nahalala be loatra' (2018)
Mandra-pahoviana? 33 minitra
Iza no ao anatiny? David Tran, Randy Clemens ary Adam Holliday
Iza no nitantana azy? Griffin Hammond
Fa inona izany? Raha tsy hoe mipetraka eo ambanin'ny vatolampy ianao dia mety ho fantatrao amin'ny saosy sakay Thai Sriracha, izay hita ao amin'ny trano fisakafoanana sy tokantrano rehetra. Na dia toa nisondrotra nalaza tampoka aza izany dia tsy izany no izy. Ny horonantsary dia mijery ny tantaram-piainan'ilay saosy mafana malaza sy ny nahatonga an'i Huy Fong Foods nahatonga an'i Sriracha ho lasa fahatsapan'ny fivavahana iraisam-pirenena.
Jereo ny 'Sriracha' (2013)
Iza no ao anatiny? Lee Alexander McQueen, Janet McQueen ary Gary McQueen
Iza no nitantana azy? Ian Bonhôte sy Peter Ettedgui
Fa inona izany? Ela be talohan'ny nanamboarany ny indostrian'ny lamaody dia nanonofy ny hamoaka ny mari-pamantarana azy i Alexander McQueen. Ahoana no nahatonga ny fanjakany? Ny sarimihetsika dia mitrandraka ny fiainan'i McQueen, ny asany ary ny lovany, hatramin'ny androny fony izy mbola tanora ka hatramin'ny naha-mpamorona endrika an'i Givenchy azy. Ny zava-misy voalaza amin'ny alàlan'ny masom-panahin'ireo namany sy fianakaviany dia mihosin-tsigara fotsiny ilay mofomamy.
Jereo ny 'McQueen' (2018)
10.'The Tillman Story'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 35 minitra
Iza no ao anatiny? Pat Tillman, Josh Brolin ary Mary Tillman
Iza no nitantana azy? Amir Bar-Lev
Fa inona izany? Tamin'ny taona 2002, Pat Tillman dia nandà ny fifanarahana an-tapitrisany dolara tamin'ny NFL hiditra ao amin'ny Tafika. Roa taona taty aoriana dia novonoina tamina lozam-pifamoivoizana tamina lozam-pifamoivoizana fony izy tany Afghanistan. Ny sarimihetsika dia mijery ny dian'ny fianakaviany hamantatra ny marina momba ny fahafatesany, izay tsy noho ny Taliban araka ny nitaterana azy tany am-boalohany.
Jereo ny 'The Tillman Story' (2010)
iraika ambin'ny folo.'Ny mpanjaka tsipika: The Al Hirschfeld Story'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 26 minitra
Iza no ao anatiny? Al Hirschfeld, Julie Andrews ary Lauren Bacall
Iza no nitantana azy? Susan manafana ny dryfoos
Fa inona izany? Ny sarimihetsika dia manaraka ny fiainana sy ny asan'ny mpanakanto nahomby Al Hirschfeld, izay fantatra amin'ny fanaovana sary sarintanin'ny olo-malaza ho an'ny New York Herald Tribune SY ny New York Times tamin'ny taona 20 '.
eyeshadow ho an'ny maso volontany
Jereo ny 'The Line King: The Al Hirschfeld Story' (1996)
12.'Reny tsy hita'
Iza no ao anatiny? Robert McCallum sy Chris Byford
Iza no nitantana azy? Robert McCallum sy Jordan C. Morris
Fa inona izany? Dimy amby roapolo taona taorian'ny fanjavonan'ny zava-miafina ny renin'izy ireo, Rob McCallum sy Chris Byford dia tofoka amin'ny tsy fantatra. Noho izany, manao ny iraka hitany izy ireo mba hahalala ny marina ary hitodika any amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviany manokana hahazoana valiny. Na izany aza, tsy ela dia nanokatra zava-miafina izay tsy hitan'ny olona tonga izy ireo. Ny filazana fa mampiahiahy ity horonantsary nahazo loka ity dia fanambarana tanteraka.
Jereo ny 'Missing Mom' (2018)
Iza no ao anatiny? Michele Simon sy Katie Couric
Iza no nitantana azy? Stephanie Soechtig
Fa inona izany? Tamin'ny fotoana nieritreretantsika fa nahalala ny zava-drehetra momba ny fahasalamantsika dia nitranga izany. Leo mandehandeha ny mpijery amin'ny alàlan'ny tantara ratsy mandritra ny 30 taona (ary manisa) izay namitahan'ny mpanjifa ny indostrian'ny sakafo, miaraka amin'ny governemanta amerikana. Ny fanadihadiana dia manome fijery manokatra maso amin'ny anton-javatra maro izay mandray anjara amin'ny fitomboan'ny valan'aretina matavy loatra any Amerika, noho izany dia mitombo, ry vahoaka.
Jereo ny 'Fed Up' (2014)
14.'Rachel Hollis: Namboarina ho bebe kokoa'
Mandra-pahoviana? adiny 2
Iza no ao anatiny? Rachel sy Dave Hollis
Iza no nitantana azy? Jack Noble
Fa inona izany? Rachel Hollis dia fantatry ny besinimaro amin'ny maha-mpanoratra amidy indrindra an'i Zazavavy, sasao ny tavanao . (Izay tena amporisihinay.) Fa ny mety tsy fantatrao dia izy koa no namorona ny fihaonambe RISE, izay natao hanolorana toerana manohana an'ireo vehivavy amin'ny fiaviana rehetra. Ny sarimihetsika dia manome tsipiriany momba ny diany hahatonga ny fahitany ho zava-misy, ary tsy maintsy jerena izany ho an'ireo mpandraharaha.
Jereo ny 'Rachel Hollis: Namboarina ho bebe kokoa' (2018)
dimy ambin'ny folo.'Gridin'ny fiainana'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 25 minitra
Iza no ao anatiny? Jonathan Taggart
Iza no nitantana azy? Jonathan Taggart
Fa inona izany? Nanomboka tamin'ny 2011 ka hatramin'ny 2013, nitsidika olona 200 samihafa tany Canada niaraka tamin'ny mpamokatra azy, i Jonathan Taggart, i Phillip Vannini. Ny trondro? Ireo olona ireo dia nisafidy ny hiaina ivelan'ny takelaka, izay midika fa nahita fomba hafa hananganana herinaratra izy ireo. Iza no mahalala, ireo zavatra noforonina mahavariana aza mety handresy lahatra anao hiala vetivety fotsiny.
Jereo ny 'Life Off Grid' (2016)
16.'Ny toeram-pambolena kely lehibe indrindra'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 31 minitra
Iza no ao anatiny? John sy Molly Chester
Iza no nitantana azy? John Chester
Fa inona izany? Rehefa mividy toeram-pambolena maharitra 200 hektara ivelan'i Los Angeles ny mpivady dia manomboka amin'ny fiainana tena izy ireo Nividy fiompiana izahay traikefa nahafinaritra. Raha tsy ela dia fantatr'izy ireo fa tsy mora ny fambolena biby fiompy, ny fanadihadiana dia mizaha ny fahombiazany sy ny tsy fahombiazany rehefa manova ny toeram-pambolena ho orinasa mahasoa izy ireo.
Jereo ny 'The Little Little Farm Farm' (2019)
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 16 minitra
Iza no ao anatiny? Johnny Royal sy Josef Wages
Iza no nitantana azy? Johnny Royal
Fa inona izany? Na dia tsy dia fantatra loatra aza ny momba ny Illuminati, ny mpanoratra sy ny lahatahiry Johnny Royal dia manao izay rehetra azony atao mba hamaritana ny marina momba ny fiarahamonina miafina. Ilay mpanao horonantsary dia nanadihady ny mpahay tantara sy ny manam-pahaizana Illuminati tamin'ny fiezahana hanome fanazavana momba ilay vondrona, izay namela olana ho an'ny besinimaro: Tena misy ve sa tena foronina ny Illuminati?
Jereo ny 'Illumined' (2019)
18.'Very Paradisa: Ny vono olona tao amin'ny Robin Hood Hills'
Mandra-pahoviana? 2 ora sy 28 minitra
Iza no ao anatiny? Tony Brooks, Diana Davis ary Terry Wood
Iza no nitantana azy? Joe Berlinger sy Bruce Sinofsky
Fa inona izany? Ity sarimihetsika ity dia mirakitra ny fitsarana ny West Memphis Three, tanora telo izay voarohirohy ho namono zazalahy kely telo tamin'ny taona 1993 tany Arkansas. Ny porofo mampiahiahy dia nampihetsi-po ny mpikaroka nandritra ny taona maro, koa amboary ny popcorn.
Raha mahatsiaro ho sambatra ianao dia aza hadino ny mijery ireo fizarana roa manaraka amin'ny trilogy, Paradisa very 2: fanambarana SY Paradisa very 3: afofandiovana .
Jereo hoe ‘Very Paradisa: Famonoana olona tao Robin Hood Hills’ (1996)
19.'Tsy ao an-tsaina, tsy mahita'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 27 minitra
Iza no ao anatiny? John Kastner
Iza no nitantana azy? John Kastner
Fa inona izany? Ny horonantsary dia mitantara ny momba ireo olona efatra mpitsabo aretin-tsaina ao amin'ny Brockville Mental Health Center any Canada, izay manampahaizana manokana amin'ny asan-dahalo mahery setra. Ny talen'ny John Kastner dia niresaka tamin'ny olom-peheziny momba ny tahotra ny fiverenany amin'ny fiarahamonina. Na dia tsy izany aza ny jiro malefaka indrindra, ilay sary mihetsika dia mety hahatonga anao hahatsapa ho mirona kokoa hanome olon-kafa vintana.
Jereo hoe 'Tsy ao an-tsaina, tsy mahita' (2014)
Sary NASA / Getty
roapolo.'Ny Movie Movie'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 19 minitra
Iza no ao anatiny? Buzz Aldrin, Neil Armstrong ary Yuri Gagarin
Iza no nitantana azy? Tony Palmer
Fa inona izany? Raha tsy anao ny tena heloka bevava, aza mitady lavitra intsony Ny Movie Movie . Ny flick dia fanomezam-boninahitra maharitra adiny iray fanampiny amin'ny fitsangatsanganana Apollo 11 volana. NASA manokana nangataka ny hanaovana sarimihetsika ho fanomezam-boninahitra ny faha-10 taonan'ny fotoana lehibe iray, koa eny, raharaha lehibe io.
Jereo ny 'The Space Movie' (1980)
iraika amby roapolo.'Ny lalana mankany Guantanamo'
Iza no ao anatiny? Ruhel Ahmed, Asif Iqbal ary Shafiq Rasul
Iza no nitantana azy? Michael Winterbottom sy Mat Whitecross
Fa inona izany? Tamin'ny taona 2001, nisy vondrona namana silamo anglisy nanapa-kevitra ny handeha ho any Afghanistan raha mitsidika an'i Pakistan hanao fampakaram-bady. Rehefa voatery mandositra any Kabul izy ireo, dia ampangaina ho mpampihorohoro ary natsipy tany amin'ny tobin'ny Helodrano Guantanamo malaza any Kiobà, izay nigadra telo taona.
Jereo ny 'The Road to Guantanamo' (2006)
22.'Izay rehetra ao amin'ity Tea ity'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 9 minitra
Iza no ao anatiny? David Lee Hoffman, Werner Herzog ary Song Diefeng
Iza no nitantana azy? Les Blank sy Gina Leibrecht
Fa inona izany? David Lee Hoffman dia manam-pahaizana momba ny dite malaza eran'izao tontolo izao, izay nanokana ny fiainany hitady ny dite vita tanana tsara indrindra. Manaraka azy ny sarimihetsika rehefa mandeha any amin'ny faritra lavitra any Shina izy, toerana anazahany fitsapana ny tsirony ary fantany ny tsiambaratelo momba ny fanaovana dite izay efa nolovaina hatrizay.
Jereo ny 'All in this Tea' (2007)
2. 3.'Ny Panama Papers'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 40 minitra
Iza no ao anatiny? Elijah Wood
fitanisana momba ny fanampiana ny hafa
Iza no nitantana azy? Alex Winter
Fa inona izany? Tadidinao ve ny raharaha ratsy momba ny Papers Paners? Eny, ny talen'ny Alex Winter dia nijery lalina ny tranga kolikoly manerantany ao amin'ity dokambarotra fampahalalana ity, izay manadihady ny fizotry ny hetsika izay miteraka famoahana ireo antontan-taratasy tsiambaratelo 11,5 tapitrisa vokatry ny fifampiraharahana tsy ara-dalàna nataon'i Jürgen Mossack sy Ramón Fonseca.
Jereo ny 'The Panama Papers' (2018)
24.'Ankizivavy kely 4'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 42 minitra
Iza no ao anatiny? Maxine McNair, Walter Cronkite ary Chris McNair
Iza no nitantana azy? Spike Lee
Fa inona izany? Ny talen'ny Spike Lee dia nanolotra fijerena antsipirihany ny fanapoahana baomba fiangonana iray tany Alabama tamin'ny 1963, izay nahafaty zazavavy kely efatra: Addie Mae Collins, Denise McNair, Carole Robertson ary Cynthia Wesley. Mampiasa resadresaka sy sary voatahiry ilay sarimihetsika hijerena ny fomba nanentanana ny hetsika sivily ho an'ny zon'olombelona amerikana.
Jereo ny '4 Little Girls' (1997)
25.'Zachary malala: Taratasy ho an'ny zanaka lahy momba ny rainy'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 33 minitra
Iza no ao anatiny? Kurt Kuenne sy David Bagby
Iza no nitantana azy? Kurt Kuenne
Fa inona izany? Tamin'ny taona 2001 dia notifirin'ny sakaizany taloha ny Dr. Andrew Bagby, izay nandositra nankany Canada ary niara-nandeha malalaka niaraka tamin'ny zanak'i Andrew, Zachary. Ny sarimihetsika dia miova ho hafatra ho an'ny zazalahy kely avy amin'ny fianakavian'i Andrew izay tsy nanambady, mba hahafantarany tsara hoe iza ny dadany biolojika.
Jereo ny 'Zachary malala: taratasy ho an'ny zanaka lahy momba ny rainy' (2008)
Mandra-pahoviana? 59 minitra
Iza no ao anatiny? Thor Heyerdahl, Herman Watzinger ary Erik Hesselberg
Iza no nitantana azy? Thor Heyerdahl
Fa inona izany? Ny horonan-tsary dia mandrakitra ny dian'ny mpanoratra norveziana sady mpikaroka tany Thor Heyerdahl izay nalaza be izao namakivaky ny Oseana Pasifika tamin'ny alàlan'ny raft. Somary daty io, saingy nandresy ny Oscar ho an'ny Feo Documentary tsara indrindra tamin'ny faha-24 taonan'ny Academy Awards, ka avelantsika hisosa.
Jereo ny 'Kon-Tiki' (1950)
27.'Star Wars Empire of Dreams'
Mandra-pahoviana? 2 ora sy 30 minitra
Iza no ao anatiny? Robert Clotworthy, Walter Cronkite ary George Lucas
Iza no nitantana azy? Edith Becker sy Kevin Burns
Fa inona izany? Raha tianao Adin-kintana , avy eo mampifantoka ny masonao amin'ity vatosoa any ambadika ity. Ny doka dia manome fijerena lalina ny fomba nanaovana ny trilogy tany am-boalohany, ao anatin'izany Adin-kintana , Miverina ny fanjakana SY Fiverenan'i Jedi .
Jereo ny 'Star Wars Empire of Dreams' (2004)
28.'Don'Atsaharo i Believin': Everyman's Journey'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 45 minitra
Iza no ao anatiny? Jonathan Kain, Deen Castronovo ary Arnel Pineda
Iza no nitantana azy? Ramona S. Diaz
Ahoana izany ? Rehefa hitan'ny mpiangaly gitara Journey Neal Schon an'i Arnel Pineda ao amin'ny YouTube dia natolony ilay mpitendry zavamaneno Filipiana hanana fotoana mety ho mpikambana ao amin'ny tarika vaovaon'izy ireo. Ny fanadihadiana dia manaraka ny dian'i Pineda ho lasa mpihira mpitarika, tsara, Journey.
Jereo hoe 'Aza Mijanona Finoana': Everyman's Journey '(2012)
29.'Fiainana aorian'ny Flash'
Iza no ao anatiny? Sam Jones, Melody Anderson ary Brian Bless
Iza no nitantana azy? Lisa Downs
Fa inona izany? Manome fijery tsy fahita firy amin'ny fiatraikany ilay sarimihetsika Flash dia nanana ny kintany, Sam J. Jones, ary ny fiantraikan'ny fahombiazan'ny horonantsary kultika tamin'ny asany amin'ny ho avy.
Jereo ny 'Life After Flash' (2019)
30.'Ilay Teny F hafa'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 39 minitra
Iza no ao anatiny? Tony Adolescent, Art Alexakis ary Tony Cadena
Iza no nitantana azy? Andrea Blaugrund Nevins
Fa inona izany? Aza mety hofitahina amin'ny lohateny fa mahagaga ity mihetsika ity dok. Manaraka vondron'olona punk rockers, izay miatrika hetsika lehibe iray amin'ny fiainana: ny ray.
Jereo ny 'The F F Word' (2011)
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 47 minitra
Iza no ao anatiny? Alec Baldwin, Tony Brown ary James Carville |
Iza no nitantana azy? Eugene Jarecki
Fa inona izany? Tamin'ny fiezahana hahatakatra ny sain'ny Elvis Presley, ilay mpamokatra horonantsary Eugene Jarecki dia niroso tamin'ny dia an-dalam-be niampita tamin'ny Rolls-Royce izay fananan'ny mpihira taloha. (Santionany.)
Jereo ny 'The King' (2018)
32.'Sarimihetsika momba ny làlana'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 10 minitra
Iza no nitantana azy? Dmitry Kalashnikov
Fa inona izany? Raha iray amin'ireo olona afaka mandany ora maro amin'ny fakantsary dashcam amin'ny Internet ianao dia ampiriminay. Ity horonantsary fanadihadiana ity dia manasongadina rakitsary sary nalaina avy amin'ireo làlana rosiana be mponina, ary nahatsapa ho tony kokoa tampoka izahay momba ny fivezivezena isan'andro.
Jereo ny 'The Road Movie' (2018)
ny fomba hampihenana ny fihenan'ny volo
33.'John McEnroe: eo amin'ny tontolon'ny fahalavorariana'
Iza no ao anatiny? John McEnroe
Iza no nitantana azy? Julien Faraut
Fa inona izany? Ny fanadihadiana dia mampiseho an'i John McEnroe nifaninana tamin'ny Open French tany amin'ny kianja Roland Garros tamin'ny 1984. Nalaina tamina fakantsary 16 mm ny sary, naka ilay atleta matihanina tamin'ny tampon'ny asany. (Tamin'izany fotoana izany dia izy no mpilalao laharana voalohany manerantany.)
Jereo ny 'John McEnroe: eo amin'ny tontolon'ny fahalavorariana' (2018)
3. 4.'Kaody mainty'
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 20 minitra
Iza no ao anatiny? Andrew Eads, M.D.; Jamie Eng, M.D. ary Luis Enriquez, R.N.
Iza no nitantana azy? Ryan McGarry, M.D.
Fa inona izany? Ny mpitsabo Ryan McGarry dia manao ny laharana voalohany amin'ny fanaovana sarimihetsika amin'ity dokotera filoham-pirenena ity, izay manolotra fijerena anatiny ny sampana vonjy taitra be olona indrindra any Amerika. Koa satria ny antsipiriany momba ny tena fiainana sy ny fahafatesana dia manasongadina izany safidy izany, tsy natao ho an'ireo torana fo.
Jereo ny 'Code Black' (2014)
35.'Misafotofoto ny rano'
Iza no ao anatiny? Michael Brown, Brian Nobles, Scott Rivers ary Kimberly Rivers Roberts
Iza no nitantana azy? Tia Lessin sy Carl Deal
Fa inona izany? Mpivady Afrikanina mpivady no nanoratra ny dian'izy ireo ho tafavoaka velona raha voatery mivoaka ny tafio-drivotra Katrina amin'ny tafon-tranon'ny mpifanila trano aminy izy ireo. Misafotofoto ny rano dia notendrena handray ny loka Academy for Best Documentary Feature tamin'ny 2009.
Jereo ny 'Trouble the Water' (2008)
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 17 minitra
Iza no ao anatiny? Ashley Arbaugh sy Rachel Blais
Iza no nitantana azy? David Redmon sy Ashley Sabin
Fa inona izany? Ity sarimihetsika ity dia manolotra fampitahana mahaliana eo amin'ny indostrian'ny maodely mandroso any Siberia sy Tokyo. Na dia toa samy hafa be aza izy ireo, ilay sary dia mamantatra ny fifandraisana izay mampifandray ireo toerana roa.
Jereo ny 'Girl Model' (2011)
Mandra-pahoviana? Adiny 1 sy 23 minitra
Iza no ao anatiny? John Wood sy Shannon Whisnant
Iza no nitantana azy? Bryan Carberry sy Clay Tweel
Fa inona izany? Manaraka ny amputee iray antsoina hoe John Woods, izay voatery hifaninana amin'ny tongony mpivaro-tena aorian'ny nahitan'ny lehilahy azy tao anaty grill novidiany tamin'ny lavanty. Minoa na tsia, ity tantaram-piainana tena izy ity dia hamela anao haminavina hatramin'ny farany.
Jereo ny ‘Finders Keepers’ (2015)
Iza no ao anatiny? Nim Chimpsky sy Profesora Herbert Terrace
Iza no nitantana azy? James Marsh
Fa inona izany? Mitantara ny tantaran'i Nim, chimpanzee iray izay lohahevitry ny andrana iray izay nahatonga azy ho notezaina toy ny olona.
Jereo ny 'Project Nim' (2011)
Mifandraika: Asandrato ny masonao amin'ny takelaka fizarana Amazon Prime Oktobra 2019
Sokajy Anontanio The Expert Ao Amin'ny The News Fampihenan-Danja
Asa Sy Vola
Fahalalana & Fanabeazana
meggle markle mampatahotra boss
vadin'i Dwayne Johnson
fanafody haingana kokoa amin'ny fitomboan'ny volo
paoma maitso mahasoa ny fihenan-danja
Fetin'ny reny mampihomehy
volo latsaka avy amin'ny fitsaboana faka